မာရ်နတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်သမျှ အမေးအဖြေများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မာရ်နတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်သမျှ အမေးအဖြေများ
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Dec 16, 2011 in Copy/Paste | 18 comments
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား မာရ်နတ်ကြီး အကြောင်းစဉ်းစားစရာတွေများနေလို့ မေးခွင့်ပြုပါအရှင်ဘုရား။ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးအထပ်က မာရ်နတ်ကြီးဟာ ဘယ်လိုကောင်းမှုတွေကြောင့် နတ်စည်းစိမ်ကို ရရှိခဲ့ပါသလဲ။ ဘယ်လိုကြောင့် အများကောင်းမှုတွေပြုချိန်မှာ ဒေါသတကြီးနဲ့ လိုက်ဖျက်ဆီးတတ်ပါသလဲ။ ၀သဝတ္တီနတ်ပြည်က ကျန်နတ်များကရော ဆိုးယုတ်ကြပါသလား။ မြန်မာများရဲ့အသိမှာ ဆိုးယုတ်သောနတ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ မာရ်နတ်ကြီးဟာ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးအထပ်က နတ်အကြီးအမှူးဖြစ်တဲ့အတွက် တာဝတိ`ံသာက သိကြားမင်းထက် တန်ခိုးအရာမှာ သာလွန်လိမ့်မယ်လို့တော့ တွေးမိပါတယ်။ မာရ်နတ်မင်း ဖျက်ဆီးတာတွေကို သိကြားနတ်အပါအဝင် လောကပါလနတ်မင်းကြီးလေးပါးတို့ တားဆီးနိုင်ပါ့မလား အရှင်ဘုရား။
ဖြေ။ ။ အင်း မာရ်နတ်အကြောင်းကို ပိဋကတ်လမ်းညွှန်ကျမ်း ဒုတိယတွဲ၊ စာမျက်နှာ (၂၅၁)မှာ မာရ်နတ်(အစစ်၊အတု)နှစ်မျိုး တွေ့ရပါတယ်။ (၁) မာရ်နတ်မင်း (အစစ်)မှာ ဝသဝတ္တီလို့ခေါ်ပြီး အဲဒီနတ်ပြည်မှာနေကာ နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်ကို အစိုးရပါတယ်။ ဒီမာရ်နတ်မင်းအစစ်ကား ဘုရားရှင်အား နှောက်ယှက်တဲ့ မာရ်နတ်မဟုတ်ပေ။ ဒီမာရ်နတ်က မာရ်နတ်အစစ်။
(၂) ဘုရားရှင်အား အနှောက်အယှက် အမျိုးမျိုးပေးနေတဲ့မာရ်နတ်ကြီးမှာ ”မာရ၊ ကဏှ၊ ပဇာပတိ၊ အန္တဂူ၊ နမုစိ၊ ပမတ္တဗန္ဓု၊ ပါပိမ၊အန္တက”ဟုအမည်အမျိုးမျိုးခေါ်ကာ ပရနိမ္မိတဝသဝတ္တီဘုံမှာနေတဲ့ နတ်သားကြီးပါ။ ပရနိမ္မိတဝသဝတ္တီနတ်မင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဓားပြသဖွယ် ဆိုးသွမ်းတဲ့နတ်ဆိုးကြီးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမာရ်နတ်ကတော့ မာရ်နတ်အတု။
ဒီမာရ်နတ်ကြီးဟာ ကကုသန္နဘုရားရှင် လက်ထက်တော်တွင် မောင်ဖြစ်သူက ဒုဿီမာရ်နတ်ဖြစ်ပြီး နှမဖြစ်သူက ကာဠီအမည်ရှိကြောင်း၊ ၄င်းကာဠီရဲ့သားဟာ ယခု ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တွင် မာရ်နတ်ဖြစ်လာကြောင်း သိရပါတယ်။ အဖကိုမူ မသိရပါ။ ဒုဿီမာရ်နတ်ဟာ သူကြွယ်ပုဏ္ဏားတွင် စွဲဝင်ပြီး ဘုရားရှင်ကိုဆဲရေးခြင်း၊ ရဟန်းတို့ကို ဆဲရေးချောက်ချားစေခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်း၊ ရဟန်း၊ ရဟန်းမတို့အနီးတွင် ဝိသဘာဂအာရုံဖန်ဆင်းပြီး လူတို့ကိုမြင်စေခြင်း၊ ရဟန်း၊ ရဟန်းမတို့အား အပျိုမများ၊ လူပျိုများနှင့် ဆက်ဆံကြပုံတို့ကို ဖန်ဆင်းပြခြင်း၊ မုဆိုး တံငါတို့ကဲ့သို့ ငါးမျှားပုံ ငှက်ထောင်ပုံတို့ကိုဖန်ဆင်းပြခြင်း၊ လူတို့က မကြည်ညိုအောင်လုပ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် ကကုသန်ဘုရားရှင်ရဲ့ လက်ယာရံဖြစ်တဲ့ ဝိဓုရထေရ်ရဲ့ ဦးခေါင်းကို ကျောက်ခဲနဲ့ စုတ်ပြတ်ကွဲထွက်သွားအောင် ပစ်ခြင်းစသည်တို့ကို ပြုခဲ့ပါတယ်။
၄င်းသေသောအခါ အဝီစိငရဲတွင် နှစ်ပေါင်းတစ်သိန်းမျှ ကာလပတ်လုံး ဒုက္ခခံရပါတယ်။ ၄င်းကား အရဟန္တဃာတကကံကြီး ထိုက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို လိုက်လံဖျက်စီးနေတဲ့ မာရ်နတ်ဟာ ဒုဿီမာရ်နတ်ရဲ့ တူတော်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မာရ်ဆိုသည်မှာ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ တားဆီးခြင်း သဘောရှိတဲ့ အရာများကို ဆိုလိုပါတယ်။ ၎င်းမာရ်တို့ဟာ ဒေ၀ပုတ္တမာရ်၊ ကိလေသမာရ်၊ အဘိသင်္ခါရမာရ်၊ ခန္ဓမာရ်၊ မစ္စုမာရ်ဟု ငါးမျိုးရှိပါတယ်။
(၁) ရွှေပလ္လင်တော်မြတ်ကို စစ်တပ်ဖြင့်တိုက်ပြီး လုယူလိုတဲ့ မာရ်နတ်သားကို ဒေ၀ပုတ္တမာရ်ဟု ခေါ်တယ်။
(၂) ကိလေသာတရား (၁၀^၁၅၀၀) တို့ကို ကိလေသမာရ်ဟု ခေါ်တယ်။
(၃) ဘ၀သစ်ဖြစ်ဖို့ရန် စီမံလျက် ပစ်ချတတ်၊ ညွတ်တတ်ပြုပြင်တတ်တဲ့ လောကီကုသိုလ်ကံ-အကုသိုလ်ကံတို့ကို အဘိသင်္ခါရမာရ်ဟု ခေါ်တယ်။
(၄) ရဟန္တာမဖြစ်မီ အတွင်းကာလမှာ အဆိုပါ အဘိသင်္ခါရကံတို့ရဲ့ စီမံချက်အရ ဘ၀သစ်ဖြစ်ရလတ္တံ့သော ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို ခန္ဓမာရ်ဟု ခေါ်တယ်။
(၅) သေခြင်းတရားကို မစ္စုမာရ်ဟု ခေါ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဘုရားရှင်များကို နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ မာရ်နတ်မင်းဟာ အစွန်းရောက်သူတစ်ဦးလို့ ပြောရမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ (၃၁)ဘုံရှိတဲ့ သတ္တ၀ါတို့တွင် သူသာတန်ခိုးကြီးတယ်၊ ကာမဂုဏ်ဆိုတာ သတ္တ၀ါတွေအတွက် သူကပဲ ဖန်ဆင်းပေးထားတာမျိုး အထင်ရောက်နေသူပါ။ သတ္တ၀ါတွေ သံသရာမှာ ဘ၀မျိုးစုံ ကျင်လည်ရင်း သူဖန်တီးပေးထားတဲ့ လောကီအာရုံ ကာမဂုဏ်တွေကို ခံစားနေကြတာပဲ သူကကြိက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာမဂုဏ်ကို စွန့်ပယ်ဖို့ နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ တရားဟောမဲ့ ဘုရားလောင်းတွေဆိုရင် သူကလိုက်ပြီး နှောက်ယှက်တာပါ။
ဘုရားလောင်းတောထွက်မယ်ဆိုလဲ တားတာပဲ။ ဘုရားလောင်း တောထွက်ခါနီးမှာ အသင်မင်းသား တောမထွက်ပါနဲ့။ နောက် (၇)ရက်ကြာရင် စကြာရတနာ ဆိုက်ရောက်လာပါမယ်။ အသင်မင်းသား စကြာမင်းဖြစ်တော့မယ်။ အခုလို ငယ်တုန်းမှာ ကာမဂုဏ်တွေ ခံစားပါဦး၊ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ အသက်ကြီးပြီး ကာမဂုဏ်တွေ မခံစားနိုင်တော့မှ လုပ်ရမှာလေ။ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပါ အသင်မင်းသားလို့ တားပါတယ်။ ဘုရားဖြစ်ခါနီးတော့လည်း နှောက်ယှက်တာပါပဲ။ ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လည်း သင်လိုချင်တဲ့ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရပြီ တရားမဟောနဲ့လို့ တားပါသေးတယ်။ ဘုရားဖြစ်ပြီး တရားလိုက်ဟောနေတော့လည်း မြန်မြန်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ မြတ်စွာဘုရားကို လာလာပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီမာရ်နတ်မင်းဟာ အစွန်းရောက်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူအထင်မှားနေတဲ့ သူဖန်ဆင်းပေးထားတာလို့ ထင်နေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့ ကာမဂုဏ်များကိုသာ သူလိုပဲ အများကိုပါ ခံစားစေချင်တဲ့ အစွန်းရောက် မာရ်နတ်မင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မာရ်နတ်မင်းဘ၀ကနေ သက်တမ်းကုန်ရင်တော့ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းမှုများကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် စိတ်ထားမကောင်းဘဲ အများအကျိုးကို ဖျက်စီးချင်သူ၊ ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရန် မေ့နေပြီး ကာမဂုဏ်ထဲမှာပဲ ပျော်ပိုက်နေသူများဟာ မာရ်နတ်မင်းနဲ့တူနေတာကြောင့် မိမိတို့လည်း မာရ်နတ်မင်းမဖြစ်အောင် သတိထားကြပါလို့ ပြောကြားရင်း စာဖတ်သူများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်…..။
မေးခွန်း(၂) အရှင်ဘုရား မာရ်နတ်ဟာ ရှင်ဥပဂုတ်တ ကိူယ်တော်မြတ်ကြီးက ဘုရားရှင်အသွင်ဖန်းဆင်းပြမှခွေးသေကောင်ပုတ်ဖြုတ်ပေးမယ်ဆိုလို ဘုရားရှင်အသွင်ဖန်ဆင်းပြခဲ့ရဖူးတယ်လို့ဖတ်ဖူးပါတယ်ဘုရား။ အဲဒီမာရ်နတ်ကျတော့ဘယ်သူပါလဲဘုရား။
ဖြေ။ ။ ဒကာမရေ အရှင်ဥပဂုတ္တအကြောင်းဖတ်ရတဲ့စာထဲမှာလည်း မာရ်နတ်မင်းဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတွေ့ဖူးတယ်လို့ ပါရှိတာကိုထောက်ဆကြည့်မယ်ဆိုရင် အဲဒီမာရ်နတ်ဟာလည်း ယခုပြောပြတဲ့ ဘုရားရှင်လက်ထက်က မာရ်နတ်မင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မာရ်နတ်ရောက်နေတဲ့ ပရနိမ္မိတ၀သ၀တ္တီနတ်ပြည်ဟာ သက်တမ်းရှည်လှတဲ့အတွက် လူပြည်သက်တမ်းနဲ့ဆို အဲဒီချိန်ထိ အသက်ရှင်နေလို့ ရပါတယ် ဒကာမရေ။
မေးခွန်း(၃) ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ဖူးပါတယ်။ နာမည်ကြီးစာအုပ်တစ်အုပ်ပါပဲဘုရား။ စာအုပ်နာမည်က ဗုဒ္ဓဒိုင်ယာရီ ရေးသူက ပါရဂူ ဘာသာပြန်စာအုပ်တစ်အုပ်ပါပဲ။ အဲဒီထဲမှာ မာရ်နတ်ဆိုတာကို ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက မကောင်းတဲ့စိတ်လို့ ညွှန်ပြထားပါတယ်။ အဲဒါကရောဘယ်အယူအဆက လာတာပါလဲဘုရား။ နောက်ပြီး မာရ်နတ်နဲ့ ရှင်ဥပဂုတ်ဇာတ်လမ်းဟာလည်း ထေရ၀ါဒပိဋကတ်ထဲမှာ လက်ခံထားပါသလား။ တော်တော်များများကျောင်းတွေထဲမှာ ရှင်ဥပဂုတ်ပုံတော်နဲ့ ပြဿာဒ်တော်ကို ရေကန်ဖြင့် ထားရှိပူဇော်ထားတာကိုတွေ့ရှိနေရပါသည်။ အများသိစေချင်တဲ့အရာဖြစ်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်။ ဆရာတော်ဖြေကြားစေလိုပါသည်။
ဖြေ။ ။ ဗုဒ္ဓဒိုင်ယာရီထဲက မာရ်နတ်ဟာ တပည့်တော်အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ မာရ်နတ်ငါးပါးထဲက တစ်ပါးပါးကိုလည်းကောင်း၊ နှစ်ပါးသုံးပါးကို စုပေါင်းပြီးလည်းကောင်း ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တပည့်တော်ခုရေးတဲ့မာရ်နတ်က ပလ္လင်တုတဲ့မာရ်နတ်ပါ။ ရှင်ဥပဂုတ္တဇာတ်လမ်းဟာ ထေရ၀ါဒမှာမပါဘူးလို့တော့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တပည့်တော်ဖတ်ဖူးလေ့လာဖူးခဲ့တာကတော့ အပေါ်က ဒကာမ မေးခဲ့သလိုဖတ်ခဲ့ဖူးရတဲ့အတွက် အဲဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီမာရ်နတ်ဟာလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓကိုတွေ့ဖူးတယ်လို့ပါရှိတာကြောင့် အဲဒီဇာတ်လမ်းအရကိုကြည့်ပြီး အဲဒီဇာတ်လမ်းပါ မာရ်နတ်ဟာလည်း တစ်ယောက်တည်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပည့်တော်လည်း ပိဋကတ်သုံးပုံကို အကုန်ကျွမ်းကျင်အောင် မလေ့လာရသေးတော့ ပိဋကတ်သုံးပုံမှာ ရှင်ဥပဂုတ္တအကြောင်း ပါမပါတော့ သေချာမပြောနိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တပည့်တော် စဉ်းစားလို့ ရတာကတော့ ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်အကြောင်း ပိဋကတ်ထဲမှာ မပါဘူးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဥပဂုတ္တဟာ တတိယသင်္ဂါယနာ မတင်ခင်အချိန်မှ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဆိုတော့ ပိဋကတ်ထဲမှာ မပါဝင်နိုင်ပါ။ ဒါပြင် တတိယသင်္ဂါယနာမှာ ဂိုဏ်းဂဏတွေ အများကြီးကွဲသွားသေးတာဆိုတော့ ရှင်ဥပုဂုတ္တဟာ ဘယ်ဂိုဏ်းဝင်မှန်းမသိတာကြောင့်လည်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ မထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရှင်ဥပဂုတ္တအကြောင်းဟာ တကယ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်ကြည့်မှသာ အဖြေမှန်ဟာ ထွက်လာမဲ့အရာမို့ တပည့်တော်လည်း အဲဒီလောက် အချိန်မပေးနိုင်တာရော၊ ပညာအဆင့်နိမ့်သေးတာရော၊ ဗဟုသုတနည်းပါးသေးတာရော၊ ဉာဏ်ပါရမီနည်းတာရောကြောင့် တပည့်တော်လိုပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တော့ သေချာပေါက် ဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ပါ။ အဲဒီတော့ အခြားအခြားသောပညာရှင်များရဲ့ စာပေများ၊ ဟောကြားချက်များကိုထောက်ဆကြည့်ပြီး ယုံသင့်မယုံသင့် စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ ဦးဇင်းကို မာရ်နတ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မေးလာသူများအား ပြန်ဖြေပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇင်း စာဖတ်ပရိသတ်အားလုံး ဗဟုသုတတိုးပွားရန်အတွက် တင်ပြပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မှားမှန်ပါလာရင်လည်း ဦးဇင်းရဲ့ စာပေအားနည်းမှုဟု မှတ်ယူကြပါလေ။ ဦးဇင်းစာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်…….။
မာရ်ဆိုသော အဓိပ္ပါယ် အမျိုးမျိုးရှိကြောင်း အထောက်အထားနှင့် ပြေပြပေးသွားသည့်အတွက် ဗဟုသုတ လွန်စွာဖြစ်ရပါသည် အရှင်ဘုရား။ နို့မို့ရင် တပည့်တော်တို့မှာ မာရ်နတ်တပည့် ရုပ်ဝါဒီသဂျီးတို့ ပြောသမျှ တဖက်သက် လည်စင်းခံနေရပါတယ်။ ရွာသားများ နောက်တခါ မာရ်နတ်တပည့် သဂျီးနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်ရင် သူ့ဆရာကိုနိုင်တဲ့ ရှင်ဥပဂုတ် ရဟန္တာကြီးနာမည် ထည့်ရေးကြပါ။။။။။
ဦးဇင်းဘုရား တပည့်တော် ၀င်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်.. အဓိကအားဖြင့်တော့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေကိုဆွေးနွေးလိုပါတယ်… ဆွေးနွေးလိုသော်လဲ တပည့်တော်က ဗုဒ္ဒစာပေတွေကို ခြေခြေမြစ်မြစ်လေ့လာထားတဲ့လူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါ… အဲဒီအတွက် ပညာရှင်ရှုထောင့်ကနေ ဆွေးနွေးမှုမျိုးတော့မဟုတ်နိုင်ပါ… တပည့်တော်ထင်မိ မြင်မိသမျှကိုသာ ပြောပြချင်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်… မှားနေတဲ့အယူများရှိရင်လဲ… လက်ခံသဘောပေါက်နိုင်လောက်အောင်… လမ်းညွှန်ပေးပါခင်ဗျား… ဘာသာရေးပို့ စ်ဖြစ်တဲ့အတွက် တတ်နိုင်သမျှ comment မပေးမိအောင် ထိန်းပါတယ် အငြင်းပွားစရာတွေဖြစ်လာမှာစိုးတဲ့အတွက်ပါ.. ဖြစ်လာရင်လဲ ယုံကြည်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့အတွက် မပြီးစီးနိုင်တာကိုနားလည်ထားပါတယ်… သို့ သော်လဲ လက်ရှောင်နေလျှင် သိသင့်သိခွင့်ရှိနေတာတွေလွဲကုန်မှာစိုးတဲ့ အတွက် စိတ်ထဲရှိသမျှလွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးမိသမျှချပြချင်တဲ့အတိုင်းချပြချင်ပါတယ်…
–တပည့်တော် ယခုပို့ စ်မှာပါတဲ့ မာရ်နတ် (ပြိတ္တာ၊ အသူရကယ်၊ ဗြမ္မာ စသည်ဖြင့်…) ဆိုတဲ့အရာကို တစ်ကယ်ရှိတဲ့ အရာလို့ ယုံကြည်လို့ မရနိုင်ပါ… ပညာပေးဇာတ်လမ်းတစ်ခု ထဲက ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်အနေနဲ့ သာမြင်မိပါတယ်… (ကျမ်းကြီး ကျမ်းငယ် မဖတ်ဖူးတဲ့အတွက် အခိုင်အမာရေးထားသော ကျမ်းဂန်များမှာ ပါနေလို့ စော်ကားသလိုဖြစ်နေလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါ) ဤ၍ဤမျှ အစွမ်းထက်သော အရာများရှိခဲ့ လျှင် သမိုင်းအထောက်အထားများ မကျန်ပဲ မနေနိုင်တန်ရာဟု စဉ်းစားမိပါသည်… ဘာသာတရားတစ်ခုအတွက်ရော ထိုသို့ သောအရာများလိုအပ်ပါ၏လော ဟု စောကြောတက်မိပါသည်… မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေနဲ့ အပြိုင် ၎င်းအရာတွေကိုမီးမောင်းထိုးပြဖို့ ရောသင့်ပါ၏လော…
–ဗုဒ္ဒဘာသာ ၏ အမှန်တစ်ကယ် ရည်မှန်းချက်ကဘယ်ကိုရည်ရွယ်ပါလဲ ဦးဇင်းဘုရား ။
-လောကီလူဘောင်မှာ လူတွေ တည့်တည့်မှတ်မှတ်နေထိုင်နိုင်သွားဖို့ အတွက်လား
-ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေအကုန် တရားဓမ္မတွေ ကျင့်ကြံပွားများပြီး နိဗ္ဗန်ရောက်ဖို့အတွက်လား
-ဒါမှမဟုတ် ဘ၀အဆက်ဆက် ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့လူကတော့ နိဗ္ဗန်ရောက်အောင်လုပ်… မရှိသေးတဲ့လူကတော့ နောက်ဘ၀တွေအတွက်ပါရမီဖြည့်ရင်း… ကောင်းနိုးရာရာဒီဘ၀အတွက် ဆွဲသုံးဆိုတဲ့သဘောပါလား…
–အကယ်၍တပည့်တော် က ရွှေတွေငွေတွေ ပြည့်လျှံနေတဲ့ နာမည်ကြီးဘုရားတစ်ဆူရဲ့ ဌာပနာတိုက်ကိုဖောက်ပြီဆိုပါတော့… (တွေးရဲလိုက်တာဟုပြောကြပါကုန်) သို့ သော်ညား ရတဲ့ ရွှေငွေတွေတပည့်တော်အတွက် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှမသုံးစွဲပါ… ငတ်ပြတ်နေသောလူတွေကိုစနစ်တကျခွဲဝေပေးပါမည်… မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ တရားဓမ္မတွေတည့်တံ့ခိုင်မြဲဖို့သာသနာ့ကျောင်းတိုက်တွေထောင်မည်… မည်သည့်အရာက မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တာစစ်စစ်ဆိုတာပြနိုင်ဖို့research လုပ်နိုင်မည့်နေရာတွေမှာသုံးမည်…သာသနာကြီးအမှန်တစ်ကယ် စင်ကြယ်သန့်ရှင်းဖို့ အတွက် လုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးမည်… ဆိုလျှင်တပည့်တော် အဘယ်သို့ ဖြစ်မည်နည်း… လူအများရဲ့ စေတနာတွေနဲ့လျှူထားတဲ့အရာတွေကို လုပ်တဲ့အတွက် ငရဲဆိုတာကြီးသို့ မြန်းရမည်လား… ထိုသို့ သာလုပ်ခွင့်ရ၍သွားရမည်ဆိုလျှင် တပည့်တော်သွားဝံ့သည်… မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ရှိနေလျှင်လဲ အားပေးချီးကျူးလိမ်မည် ယုံကြည်သည်…
နောက်တစ်နည်းအနေနှင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိနေလျှင်လဲ တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ (ဘဏ်ဋာ) တွေကို မှိုတက်ခံပြီး မြေအောက်ထဲနေစေချင်လိမ့်မည်မထင်ပါ…
ဘာသာရေးနှင့်တိုင်းပြည်အရေးသည် တစ်ကြောင်းစီခွဲထုပ်မရသော်ညား… ကြီးကြီးမားမား စပ်နွယ်မနေသင့်ဟုတော့ထင်သည်… ဆိုလိုသည်မှာ ကနောင်မင်းသားကြီး ရေမြှုပ်မိုင်းခွဲသံကြားရုံဖြင့် မင်းတရားကြီးကပ်သောဆွမ်းကိုမဖုံးပေးပဲ ပြန်ကြွသွားသည်မျိုးမဖြစ်သင့်… တိုင်းပြည့်၏လက်တံကို ဘာသာရေးကြိုးဖြင့်မချုပ်နှောင်သင့်… တိုင်းပြည်၏အင်အား စီးပွား(ဘဏ်ဋာ) များကိုလဲ အချီးနှီး ထပ်မံမဖြုံးတီးသင့်တော့…
တပည့်တော် Law of attraction ကိုယုံကြည့်သည်…မိမိစိတ်ကိုအပြုစိတ်ကိုပဲ အမြဲတွေးနေလျှင် အပြုသဘောဆောင်တာတွေပဲဖြစ်လာမည်ကို ယုံကြည်ပါသည်… လျှူတန်းသောကိစ္စကိုလဲဤသို့ ပဲမြင်သည်… ဘယ်တန်ခိုးကြီးဘုရားကိုဘယ်လိုလျှူလိုက်လို့ ဘယ်လိုကြီးပွားသွားသည်ကိုလက်မခံနိုင်ပါ… သူ၏ယုံကြည်မှုအပြုစိတ်ကသာ သူ့ကိုကြီးပွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်မည်ထင်ပါသည်… သဒ္ဒါလွန်တိုင်းကွန့် နေကြသည်မျိုးမဖြစ်သင့်တော့ပါ…
–တပည့်တော် ဆယ့်သုံးနှစ်အရွယ်လောက်မှာ ကိုရင်ဝတ်ခဲ့ရပါတယ်… ကိုရင်ဝတ်တော့ တပည့်တော်အမိအဖတွေ အပါအ၀င် လူကြီးအတော်များများက ရှိခိုးကြပါတယ်… ယခုအခါတွေးကြည့်လျှင် တော်တော်ကြီးကိုလွဲချော်လို့ တွေ့ ပါတယ်… တပည့်တော် မှာ သင်္ကန်းဆိုတဲ့အရာခြုံလိုက်ရုံနဲ့ ရှိခိုးခံထိုက်လောက်တဲ့ အရည်အချင်းရှိရဲ့လား… တပည့်ဟာတပည့်တော်ပါ ဘာမှပြောင်းလဲမသွားပါ… ဘာတရားမှမသိမတတ်သလို ထူးပြီးမစင်ကြယ်သွားပါ… လူမစွမ်းပေမဲ့ သင်္ကန်းကတော့ရှိခိုးခံဖို့ ထိုက်တန်သည်ဆိုပါတော့.. သို့ ဆိုလျှင် ချွတ်ထားသော သင်္ကန်းကိုသာ မရှိခိုးသင့်ဘူးလားဘုရား… တပည့်တော်ကတော့ သင်္ကန်းဆိုတာလဲ သင်္ကန်းဆိုတာသက်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု ယူနီဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်သာမြင် ပါတယ်… သင်္ကန်းရုံမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်က သာအဓိကကျတယ်ထင်ပါတယ်…
–မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာ ငါတို့ တော့ဂုဏ်ယူတယ်ဟေ့ဆိုပြီး အော်တဲ့လူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်… သို့ သော် တပည့်တော်မြင်တာတော့ မွေးနေ့ ရောက်မှဘုရားသွားမယ်… သီတင်းကျွတ်ရောက်မှ လူကြီးတွေကို လာဘ်ထိုးရင်း မုန့်ဖိုးတောင်းရင်းကန်တော့မယ်… ဆိုတာတွေပါပဲ… အများစု ဘုရားရောက်သွားရင်လဲ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိတဲ့ ပါဠိစာတွေကို တွက်တွက်တွက်တွက်ရွက်ပြီး ရှိးခိုးလိုက်တာ ဘာသာရေးပါပဲ… ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား…
တပည့်တော်ရဲ့ point of view ကတော့ ရှိခိုးတယ်ဆိုတာ respect ပေးတာပါပဲ… respect ပေးတယ်ဆိုတာ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိပဲနဲ့ တော့ မပေးသင့်ဘူးထင်ပါတယ်… ဘာမှန်းညာမှန်းမသိပဲပေးနေရင်တော့ အီးယောင်ဝါးတွေများနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပဲဖြစ်နေမှာပါ… တပည့်တော်ကတော့ တထ္ထိဆန်နေမလားတော့မသိပါ… ရှိခိုးလျှင် နားမလည်တဲ့ပါဠိတွေအချိန်ကုန်ခံ မရွတ်နေတော့ပါ.. နိဗ္ဗန်ရောက်ရပါလို၏လဲ ဆုမတောင်းတော့ပါ… တတ်နိုင်သမျှကြုံကြိုက်တိုင်း မြတ်စွာဘုရား ဘာတွေပြောခဲ့ ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာ သိအောင်ကြိုးစားဖြစ်ပါတယ်… အဲဒိစိတ်နဲ့ ပဲ ဘုရားရောက်လျှင် ပြားပြားဝတ်ဦးသုံးကြိမ်ချပါသည်…
ှုဦးဇင်းနှစ်တကွ ယခုကွန်းမန့် ဖတ်သူများရဲ့ ယုံကြည်မှုကို စော်ကားသလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်… အားလုံးမှာ ကျွန်တော့် တစ်ထွာတစ်ပဲ ညာဏ်ငမွဲလေးနှင့်တွေးမိသမျှသာဖြစ်ပါကြောင်း….
ကွဲလွဲစွာယုံကြည်ခွင့်ရှိသလို ကွဲလွဲစွာဝေဖန်ခွင့်လဲ ရှိတဲ့အတွက် ဝေဖန်ကြပါခင်ဗျာ..
နာဂျာရေ.. ဌာပနာတိုက် ဖောက်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောချင်တယ်။ အဲဒီအတွေးဟာ ရုပ်ဝါဒီသမားများ အလွန်အကျွံ သုံးစွဲကြတဲ့ စကားမျိုးပါ။ တခုစဉ်းစားကြည့်ကွာ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ယုယုယယ မွေးထားတဲ့ သူများ သားပျို၊ သမီးပျိုလေးကို စည်းကမ်းကျန သေဝပ်အောင်ဆိုပြီး စစ်ထဲအတင်း ဆွဲခေါ်မယ်။ တရားသလား မတရားသလား ဖြေပါ။ သူများ အမြတ်တနိုးထားတဲ့ အရာကို လုယူပြီး ထင်ရာလုပ်ပစ်လိုက်တာ မှန်သလား ဖြေပါ။ ကိုယ်မှန်တယ် ထင်နေတဲ့ လမ်းကြောင်း ဒီဥပမာမှာ စစ်ထဲရောက်သွားရင် ကြီးပွားတိုးတက်မယ် ဆိုတာ သေချာပေါက် ပြောနိုင်သလား ဖြေပါ။ အစွန်းရောက်ရင် ဘယ်အရာမှ မကောင်းပါဘူးကွယ်၊ သို့သော် သူများ ပညာမဲ့ စေတနာသဒ္ဓါ အစွန်းရောက်တာကို မိမိက ပညာမဲ့ ဒေါသနဲ့အစွန်းပြန်ရောက်ခဲ့ရင် ဘယ်သူနစ်နာမလဲ ဖြေပါ။ တချို့အရာတွေမှာ hypothetical လျောက်မတွေးရဘူး။ ဖြစ်ကာမှ ဖြစ်ရောပေါ့ကွာ။ သမိုင်းမှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်အဖိုး မင်းကြီးဗိုလ်လရောင်ကိုယ်တိုင် အင်္ဂလိပ်ကို ခုခံတော့ အမြောက်သွန်းလုပ်ဖို့ ဘုရားက ကြေးခေါင်းလောင်းတွေကို နိုင်မှနှစ်ဆလှူပါ့မယ်ဆိုပြီး ဖြုတ်ယူခဲ့ရတာ ရှိတယ်။ ငဇင်ကာလည်း လုပ်ခဲ့တာပဲ၊ သူကြတော့ ဘာသာခြားမိုလို့ စိတ်ယုတ်မာနဲ့ လုပ်ခဲ့သပေါ့ကွာ။ ပြောချင်တာ တကယ်ငတ်လာရင် လူဆိုတာ ရတဲ့ထွက်ပေါက်ကို ယူကြတာပဲ။ ကမ္ဘာမီးလောင် သားကောင်ချနင်းဆိုတဲ့ စကားပုံရှိထားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း တကယ်ငတ်လာမှန်း သိတဲ့အခါ စစ်တပ်အနေနဲ့ လျှော့ပေးရတော့တာပဲ။ ~~~~~~~~~~~~
သင်္ကန်းစီးတိုင်း ကန်တော့သင့် မသင့်ကတော့ ကြိုက်သူ လုပ်ပါစေပေါ့ကွာ။ ကိုယ်ကမနှစ်သက်ရင် မလုပ်နဲ့ပေါ့။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်တော့ ငယ်စဉ် ကိုရင်ဝတ်၊ ပဇ္ဇင်းတက်စဉ် သင်္ကန်းဝတ်ထားတာကို အမေက ကန်တော့တဲ့အခါ မိဘကို ကျေးဇူးဆပ်တယ်ဆိုပြီး အရမ်းပီတိ ဖြစ်မိတယ်။ (အဖေကတော့ မကန်တော့ဘူး ) အမေ့ရှေ့တောင် တမင်သွားပြီး ကန်တော့ခိုင်းခဲ့တယ်။
သူကန်တော့တဲ့အခါ ကျနော့်ကို ကန်တော့သလိုနဲ့ ဘုရားဆင်းတုတော်ဖက် လှည့်ဝတ်ချတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး ကျေနပ်ခဲ့တယ်။ ~~~~~~~
ကန်တော့ခြင်းဆိုတာ အရိုအသေပေးခြင်းထက် ပိုပါတယ်။ အဆင့်အမျိုးမျိုး အစားစားရှိမှာပါ။ မြတ်စွာဘုရား မတိုင်ခင်ထဲက အသက်၊ ပညာ၊ ဘုန်းကြီးသူ၊ ကျေးဇူးရှိသူများကို ရှိခိုးကန်တော့တဲ့ အစဉ်အလာ ရှိထားပုံရပါတယ်။ ဒီတော့ ကန်တော့ခြင်းကို လောကအစဉ်အလာ၊ လောကုတ္တရာ ပူဇော်ခြင်း နှစ်ဖက်စလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သုံးနေကြပါတယ်။ မိမိ တတ်သိနားလည်တဲ့ ဘုရားစာ၊ ပါဠိစာကိုပဲ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇာယ်ရင် စိတ်ပိုထားတတ်နိုင်လို့ ပိုကုသိုလ်ရ စိတ်ကြည်လင်မှာပေါ့။ သို့သော် လောကမှ ကိုယ်မသိ မလိုက်နိုင်တဲ့ အရာတွေများစွာလည်း ရှိသေးတာမို့ သောက်ရမ်းတော့ လျောက်မပြောနဲ့ကွယ်။ တနေ့က ရွာထဲမှာ ဘယ်သူလည်း မသိဘူးပြောတာ တိုက်ဆိုင်မှုများလာရင် ထူးဆန်းမှုတဲ့။ ထူးဆန်းမှု များလာရင် ထူးခြားမှု ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒီနောက်သိပ်လိုက်လွန်းပြန်ရင်လည်း ထူပြီးချာသွားတတ်တယ်။ ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်း ဖြစ်ချင်ရင် အကျင့်စရဏနဲ့ သွားပါ။ ဓမ္မကို စာတွေ့မဟုတ် လက်တွေ့သိရှိခံစားနေသူ လူ၊ ဘုန်းကြီးများထံ တပည့်ခံပါ။ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ကျင့်ကြံပေါက်မြောက်ထားသူ ဆရာတော်များစွာရှိပြီး ရှာဖွေရ သိပ်မခဲယဉ်းတော့ပါဘူး။ ကံကောင်းပါစေ။။။။။
ကျေးဇူးတင်ပါတင်ခင်ဗျာ… ကျွန်တော့်အသက်ငယ်သေးတဲ့အတွက် စာဖတ်အားအရရော… လက်တွေ့ ပိုင်းထိစပ်မှုအရပါ အားနည်းပါသေးတယ်… အခုဟာက တွေးမိသမျှကို ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ချပြတဲ့သဘောပါ… အခုလို ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… လက်တွေ့ ထိတွေ့ ခံစားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါဦးမယ်ခင်ဗျာ..
ဒကာတော်ရေ့ ဦးဇင်း နည်းနည်း ဆွေးနွေးချင်တယ် ရှိခိုးတာ ကန်တော့တာတို့နဲ့ ပါတ်သက်လို့ပေါ့. ရှိခိုးတယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓကို ရှိခိုးတယ် ဆိုတာ ဗုဒ္ဓမှာ သူကိုယ်တိုင် ထိုးထွင်းပြီး သိထားတဲ့ ကောင်းတဲ့ နည်းမှန်တွေရှိတယ် ဘယ်သူမှ ညွှန်ပြလို့ သိတာ မဟုတ်ဘူးနော် သူကိုယ်တိုင် သိလာတာ..သူ့မှာ အဲဒါတွေ ရှိတော့ သူများတွေကလဲ လိုချင်ကြတယ်လေ. အဲဒီ နည်းမှန်လမ်းမှန်တွေကို လိုချင်တော့ ဗုဒ္ဓမှာရှိနေတဲ့ နည်းမှန် လမ်းမှန်တွေကို အတုခိုးရတော့တာပေါ့.. ဗုဒ္ဓမှာ ရှိနေတာတွေကို အတုခိုးသင့် အတုခိုးသင့်တာ မှန်လို့ ရှိတာတွေကို ခိုးယူကျင့်သုံးတော့ ရှိခိုးတာ ဖြစ်လာတာပဲ.. ကန်တော့တာကတော့ ဥပမာ ဘော့လုံး တစ်လုံးကို ကန်ပစ်လိုက် တော့ပစ်လိုက်ရင် အဝေးကို ရောက်သွားသလို့ တစ်ယောက်ယောက်အပေါ်မှာ ပစ်မှားထားတာတွေ ရှိနေရင် အဲဒီပစ်မှားထားတာတွေ ပြောက်သွားအောင် တောင်းပန်တဲ့ အနေနဲ့ ဦးညွှတ်တာကို ကန်တော့တယ်လို့ ခေါ်တယ်လေ..။ မှားတွေပါရင်လဲ သည်းခံဗျာ.. ဦးဇင်း သိသလောက် ၀င်ဆွေးနွေးကြည့်တာ..။
ကို NAJA က ဘယ် ဘာသာ ကိုကိုးကွယ်လဲတော့မသိဘူး၊ဗျာ.
ဒါပေမဲ့ ခင် ဗျားပြောတာမှန်ပါတယ်.
ခင်ဗျားဘ၀အတွက် ဆရာကောင်းဆိုတာမျိုးမတွေ့ဘူးသေးလို့ နေမှာပါ..
အောက်ဆုံးနား ရောက်လေ ခင်ဗျား စာကို လက်မခံလေပဲဗျို့….
မိရိုးဖလာကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာပါခင်ဗျာ… ဆရာကောင်းမတွေ့ ဖူးသေးဘူးဆိုတာလဲမှန်ပါတယ် ကျွန်တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးလမ်းပြပေးနိုင်မယ့်လူ မရှိပါဘူး… ကျွန်တော် အခုကွန်းမန့်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာ သိတဲ့တတ်တဲ့လူတွေရဲ့မျက်စိမှာ ကျွန်တော်ဟာ သေးနုတ်ပြီး သနားစဖွယ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေမှာကိုတော့သိတယ်ခင်ဗျ.. ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ပြောတာတွေက ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်ထဲအမြင်တွေကိုး… ခိုင်လုံမှုတစ်ခုမှ မပါတဲ့အတွက်ပါ…
ဒါပေမဲ့.. အခုလိုမှ မလုပ်ရင်လဲ ရှေ့ လျှောက်ဘယ်တော့မှ သိမှာတတ်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ… ကျွန်တော်ကလဲ ဘာသာရေးစာပေတွေ ကိုလေ့လာလိုက်စားရမှာက ကျွန်တော့လိုင်းမှမဟုတ်တာကိုး…
လက်မခံနိုင်တာကိုတော့ မျှော်လင့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် အထူးမပြောတော့ပါဘူး… ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်ဆိုတာမျိုးနဲ့ ငြင်းချက်ထုပ်ပြီး ကျွန်တော်ကို လမ်းပြပေးနိုင်ရင်.. ပိုမကောင်းဘူးလားခင်ဗျာ…
ဒကာ NAJA ရေ။ ဘုရားဌပနာဖောက်ပြီး ကျန်တဲ့အလိုရှိတဲ့နေရာတွေကို လှူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကို ဒီလိုလေး ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဒကာရဲ့ အသက်ကို အသက်ရှင်ရန်လိုနေတဲ့လူနာတစ်ယောက်ကို ပေးလှူသင့်မသင့် ဒကာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘယ်နေရာမဆို လိုအပ်တဲ့နေရာကို ပေးလှူသင့်တာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေရာဟာ သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အရာရသင့်တဲ့ ကံတရားရော သူ့မှာကုသိုလ်ကံရော ရှိခဲ့လားဆိုတာ ထောက်ဆကြည့်ရပါမယ်။
သေခါနီးလူနာတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့အသက်ကို အသက်ရှင်သူတွေက အစားထိုးကုလို့ရမဲ့အခြေအနေရှိသော်လည်း ကိုယ်စားလှူပေးမဲ့လူမရှိလို့ သေသွားတာဟာ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ အဲဒီသေသွားတဲ့လူနာဟာ သူ့အတွက် အသက်ရှင်ရန် ကံမပါတာရယ်၊ သူအသက်ရှင်ရမဲ့အချိန်ဟာ ဒီချိန်ထိပဲ ပါတာရယ်ကြောင့် အသက်ရှင်ခွင့်မရတာပါ။ တကယ်လို့ အစားထိုးလို့ကုရတဲ့လူနာတွေ သေမသွားအောင် ခု မေးတဲ့ဒကာရဲ့အသက်ကို လှူပေးသင့်တယ်လို့ရော ဒကာ စဉ်းစားမိရဲ့လား။
တပည့်တော်ရဲ့အသက်ကို သူတစ်ပါးအသက်ဆက်ဖို့အတွက် တော်ရုံပတ်သက်ဆယ်နွယ်မှုနဲ့တော့ မပေးနိုင်တာသေချာပါတယ်…
သဒ္ဒါတရားအလျှောက် လှူတန်းလို့ရတာချင်းတူသော်ညား ဒီနေရာမှာတော့ အသက်နဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဥပမာပေးလို့မရဘူးထင်ပါတယ်ဘုရား…
တပည့်တော်ဆိုလိုချင်တာက… ရွှေငွေပစ္စည်းကို မြေကြီးထဲထည့်ထားဖို့ လှူလိုက်လျှင်သူရဲ့အသုံးဝင်မှုက မရှိတော့တဲ့အတွက်… လည်ပတ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ဥစ္စာထဲက လျှော့ပါးသွားမှာကိုမလိုလားတာပါ… မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာပုံနေမှာကို မလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ပါ.. (နိုင်ငံရေးဆန်နေမလားတော့မသိပါ)… လှူတန်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလျှင်လဲ သူ့အတွက်တော့ ဒီပစ္စည်းလှူလိုက်တဲ့အတွက် ရစရာရှိတာ ရလိုက်မှာပါ.. ကုသိုလ် ဒါမှမဟုတ် satisfy ဖြစ်တဲ့စိတ်တစ်ခု တော့ရလိုက်မှာပါ… တပည့်တော်မေးချင်တာက…
အဲဒိလူတစ်ဦးတစ်ယောက် ကုသိုလ်(or) စိတ်ကျေနပ်မှုတစ်ခု ရဖို့ အတွက် အားလုံးအတွက်အသုံးဝင်နိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို.. အသုံးမ၀င်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြစ်လိုက်ဖို့အတွက် တန်ပါသလားဆိုတာကိုပါ…
နောက်တစ်ခုက တပည့်တော့အနေနဲ့ကံဆိုတာကို အနက်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဆိုတော့ ကံကိုမယုံဘူးလို့တော့မပြောလိုပါ…
သို့သော်… မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့်ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလျှင် ခံစားခွင့်တွေအကုန်မြင့်မားနေတဲ့ နိုင်ငံကလူတွေဟာရော.. အရင်ဘ၀က ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့ ကံတွေကိုခံစားနေကြရတာပါလား… ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတွင်းနက်နေတဲ့ မြန်မာတွေဟာ အတိတ်ကမကောင်းတဲ့ကံတွေခံစားနေရတာပါလား… တပည့်တော်တော့..ကံကြောင့်လို့မထင်ပါဘူးဘုရား…
ဒကာ NAJA ရဲ့ ကိုရင်ဝတ်တဲ့အယူအဆနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မရှင်းတာကို ရှင်းပြပေးရမယ်ဆိုရင် ဒကာသင်္ကန်းဝတ်တာ ဒကာကို ရှိမခိုးသင့်ဘဲ သင်္ကန်းကိုပဲ ရှိခိုးသင့်တယ်လို့ ဒကာက စဉ်းစားတယ်နော်။ ဒါဆို လက်အောက်ငယ်သားတွေက မိမိထက်အရာရှိသူကိုသာ ရိုသေလေးစားရမှာကို ဘာဖြစ်လို့ အရာရှိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ကတော်တွေ၊ သားသမီးတွေကို ရိုသေလေးစားကြတာလဲ။
အဲဒီလိုပဲ သင်္ကန်းကိုကန်တော့ရတာ မှန်ပေမဲ့ သင်္ကန်းဝတ်လိုက်လို့ သာသနာ့ဘောင်ရောက်သွားတဲ့လူဟာ ဘုရားရှင်ရဲ့သား၊ ရဟန္တာအရှင်မြတ်များရဲ့ ညီတော်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားတာကြောင့် သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဒကာမှာ ဘာအရည်အချင်းမှ မရှိသော်လည်း ဒကာကသာသနာ့ဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်သွားလို့ ကန်တော့ရတာပါလေ။
မိမိထက်ပညာ၊ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့လူကိုသာ ရိုသေလေးစားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ သူနဲ့သက်ဆိုင်သူများကို ဘာကြောင့် ဒကာတို့လူ့ပတ်ဝတ်ကျင်မှာရော ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာက စဉ်းစားကြည့်ရင် ဒကာ သိပါလိမ့်မယ်။
လက်အောက်ငယ်သားတွေ ကအထက်အရာရှိကိုလေးစားရမှာမှန်ပါတယ်… သို့ သော်ညား သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကတော်၊ သားသမီးတွေကို လေးစားစရာတော့မလိုပါဘူးထင်ပါတယ် သူနဲ့ဆိုင်ရာတွေကို လေးစားစရာမလိုသလို… မလေးမခန့်ဖြစ်စရာလဲမလိုလို့ထင်ပါတယ် ဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးထင်ပါတယ်အရှင်ဘုရား… လူအချင်းချင်းဂါရ၀တရား အနေနဲ့သာရှိဖို့လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်..
ဥပမာ ရပ်ကွက်လူကြီး မှာ သားတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့… သူ့ အဖေအရှိန်နဲ့ သူ့ ကိုလူတွေ လေးစားပေးနေရပြီဆိုလျှင် အဲဒိမှာ တစ်ခုတော့မှားယွင်းနေပါပြီ… ဘယ်လိုအမှားမျိုးလဲဆိုတော့ ရပ်ကွက်လူကြီးရဲ့ သြဇာကို ရပ်ကွက်လူကြီးမဟုတ်တဲ့သူ့သားက ယူသုံးနေလို့ဖြစ်ပါလိ့မ်မယ်… ဆိုလိုချင်တာက အဲဒိအခြေအနေနဲ့ဖွဲစည်းထားတဲ့ လူ့အဖွဲအစည်းဆိုတာ ပျက်စီးနေတာမဟုတ်တောင် အကောင်းဆုံး society တစ်ခုတော့မဟုတ်နိုင်တော့ပါဘူး…
တဏှာရာဂတွေ ပြည့်ရွှမ်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက်က သင်္ကန်းခြုံပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်ပြီး အရောင်ပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့… ကန်တော့ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မဖြစ်ထိုက်ဘူးထင်ပါတယ်… ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရပ်ကွက်လူကြီးရဲ့အရှိန်အ၀ါကိုယူပြီးရိုသေခံနေတဲ့ သူ့သားလိုပဲဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တပည့်တော်အမြင်တော့ မသင့်တော်သလိုခံစားမိလို့ပါဘုရား….
အခုလို ပြောမိနေတဲ့အတွက်လဲ တပည့်တော်ကိုအတိုက်အခံပြုတယ်လို့မမြင်ပါမင့်အကြောင်း.. တောင်းပန်အပ်ပါတယ်..အရှင်ဘုရား… အရှင်ဘုရားက လောကုတ္တရာအမြင်နဲ့ပြောတာတွေကို တပည့်တော်က လောကီအမြင်နဲ့ကပ်သီးကပ်သပ်တွေးနေမိလို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါဘုရား…
အရိုအသေပေးတာကတော့ မိမိထက် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ အသက်ဂုဏ်သိက္ခာတွေဟာ မိမိထက်သာလွန်တဲ့အတွက် ရိုသေပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း မိမိမှာမရှိတဲ့အတွက် ရှိတဲ့လူကို ရိုသေရတာဟာ သဘာဝကျတဲ့အတွက် ထူးထွေပြောစရာမရှိပါဘူးလေ။
NAJA ရေ…စိတ်မဆိုးနဲ့..။ စိတ်မကွက်နဲ့..။ စိတ်မပျက်နဲ့..ကွ…။ ရိုးရိုးသားသားစဉ်းစားသုံးသပ်တယ်ဆိုတာကမှ…သူတော်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့…။ ဆရာတော်တစ်ပါးဟောတာ
ကြားဖူးတယ်..။ စဉ်းစားတာကအလုပ်လုပ်တာတဲ့..။ ဘယ်သူ့ပြောတာမှတော့…လုံးဝမယုံလိုက်ပါနဲ့…။ ဒီ
comment ကအစပေါ့..။ အေး..ကိုယ့်လူပြောသလို…သက်သေပြနိုင်လောက်တဲ့အထောက်အထားခိုင်လုံမှုဆို
တာ..ဘယ်ဘာသာမှာမှရှိတာမဟုတ်ဘူး…။ သူများအရေး..သူများအပြောအဟောတွေနဲ့..လမ်းဆုံးနေတာ..။ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း..မငြင်းမိစေနဲ့…။ ဒါပေမယ့်…ဟုတ်မှာပါဆိုပြီး..ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ကတော့…မလွယ်ဘူးမှတ်..။
ဒါ့ကြောင့်…ဟိုတုန်းကဆရာသမားတွေကရေးတာနေမှာ….သူငါအပြောနဲ့လည်းမယုံနဲ့တဲ့..။ ကျမ်းထဲမှာပါလို့လည်း..မယုံနဲ့တဲ့..။ မိရိုးဖလာဆင်းသက်လာလို့ပါဆိုပြီးလည်း မယုံနဲ့တဲ့..။
ဆရာသမားပြောလို့မယုံလိုက်နဲ့တဲ့..။ ကဲ…..NAJA ရေ…သဘောတော့ကျသကွာ..။ ထောက်ခံပေးတယ်လို့တော့မယူနဲ့..။ တို့ပြောတာလဲမယုံနဲ့…။ ကုန်ကုန်ပြောမယ်ကွာ…။ ဘုရားရှင်က
သူပြောတာတောင်မယုံလိုက်နဲ့အုံးတဲ့..။ ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြည့်လို့…ကိလေသာငြိမ်းကြောင်းအမှန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့…။ သုပ္ဗဗုဒ္ဓဆိုတဲ့…သူတောင်းစားကြီးကပြောလည်း…ယုံလိုက်ပါတဲ့…။ ကဲ….
ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ… အားလုံးကိုချင့်ချိန်ညှိနှိုင်းရမှာပါ… ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ အစွန်းရောက်ဝါဒီတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး… အယူအဆတစ်ခုကို ကိုင်စွဲမထားတတ်ပါဘူး… ကိုယ့်ထက်ကောင်းတဲ့ အယူအဆ ကိုတွေ့ ရင်တော့ပြောင်းလဲလက်ခံရမှာပါပဲ…
သို့သော်ညား… သိတဲ့တတ်တဲ့လူတွေကလဲ.. ဒီနေရာမှာတော့ လက်ရှောင်နေတတ်ကြတယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ…
ဖတ်ရတာ အတော်အားရစရာကောင်းလှ တယ်ဗျာ ..
ရေးတဲ့သူတွေကလည်း ပျော့ပြောင်းညင်သာစွာ .. ရေးထားတော့ .. ဖတ်ရတဲသူတွေ ရင်ထဲချမ်းမြေ့ရတာပေါ့ .. ကျွန်တော်တွေးမိတာလေး တစ်ခုပါ ..
တကယ်လို့များ .. ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး နှစ်မျိုးယှဉ် လာမယ် .. ဘယ်အရာကိုရွေးရတော့မယ် .. ဘာသာရေးရွေးရင် … တိုင်းပြည်ကျဆုံးသွားနိုင်တယ် .. နိုင်ငံရေးရွေးရင် ဘာသာတရားပျက်စီးသွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချိန်ရောက်လာရင် ..
အကယ်လို့ စာဖတ်သူဟာ .. အဆုံးအဖြတ်ပေးရမယ့် တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နေရာမှာဆိုရင် ဘယ်အရာကိုရွေးမှာလည်း .. ?
ပြီးတော့ ခုတလောခေတ်စားနေတာ .. Multiple တွေ .. computer တွေဆိုလည်း dual core၊ Core I7 ၊ ဖုန်းဆိုလည်း Dual core၊ နိုင်ငံသားဆိုလည်း multi-citizen .. အဲ .. တစ်ခုဘဲကျန်တော့တယ် .. multi-religion .. (တွေးမိတာလေးတွေပါ)
ကျွန်တော်ရေးတဲ့အဓိပ္ပာယ် ဘယ်ရောက်သွားလဲ မသိတော့ဘူး .. အမှားများပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျား ..
ဘုန်းဘုန်း ရဲ့ပို့ စ် ဟာ ဗဟုသုတများစွာ ရရှိမိသလို
အောက်က အမေးအဖြေ များ က လည်း ဗဟုသုတ များ ထပ်ရပါကြောင်း
တပည့်တော် အနေဖြင့်က ၊ ဘာသာရေး နှင့်ပတ်သက်လျှင် ၊ ဗဟုသုတ ဝေးလွန်းသောကြောင့် ၊ ဝင်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ချင်း မရှိသောကြောင့် ၊ ကျေးဇူးတင်သည့်အကြောင်းသာ ပြောနိုင်ပါကြောင်း